Itemplate yamabali e-Instagram | Abadali be-Intanethi
Itemplate yamabali e-Instagram
I-Instagram yenye yezona nethiwekhi zentlalo zikhulayo ukusukela oko yadalwa. Ekuqaleni, yayisetyenziswa kuphela ngabantu abancinci, kodwa kancinci kancinci iinkampani ziye zangena ukuthengisa iimveliso zazo. Kwaye kulapho, njengomyili wegraphic, ubuya kungena. Kuthekani ukuba inkampani ikucela ukuba uyile umkhankaso wemifanekiso kwi-Instagram? Kuya kufuneka ubazise kubo, kodwa kuthekani ukuba uyenza ngetemplate yamabali e-Instagram?
Ngale nto uya kumnika inkcazo engcono kwaye umenze abone ukuba lo mfanekiso ujongeka njani kwiprofayile yakhe. Ke kuthekani malunga nokukubonisa ezinye iitemplates zebali le-Instagram?
1 Yintoni amabali e-Instagram
2 Kutheni usebenzisa amabali e-Instagram?
3 itemplate yebali le-instagram
3.1 itemplate yebali le-instagram
3.2 itemplate ye-cyber ngoMvulo
3.3 itemplate yebali le-instagram
3.5 Izakhelo zebali le-Instagram
3.6 iitemplates zentengiso
3.7 Ibali elidibeneyo kunye neposi
3.8 Instagram Story Pack
Yintoni amabali e-Instagram
Xa i-Instagram iqalile, konke okufuneka ukwenze kukulayisha umfanekiso kunye nesicatshulwa. Akukho Okuninzi. Enyanisweni, akazange avumele okungakumbi kunoko. Kodwa, ngokuhamba kwexesha, uthotho lweempawu zongezwa ukuba, ekugqibeleni, zenza abantu abaninzi bakhethe le nethiwekhi yoluntu.
Enye yezo zipapasho ngamabali e-Instagram. Benze ntoni? Xa i-akhawunti inebali, umfanekiso weprofayili usongelwe kumda oluhlaza. Xa ucofa kuyo, upapasho oluthe nkqo luvela oluhlala imizuzwana embalwa, kodwa ungadibanisa nekhonkco, ubeke iimoticons, amabinzana, imiyalezo, njl.
Ukuba ngumxholo oguqukayo kunye nosebenzisanayo, utsala umdla ngakumbi kwaye iinkampani ezininzi azikawusebenzisi nge-100%. Abo benzayo bahlala bejonge abaqulunqi bamaphulo abo, ukuze babe nokutsala ingqalelo yabaphulaphuli babo.
Kutheni usebenzisa amabali e-Instagram?
Ababaninzi abasebenzisa amabali e-Instagram, kwaye okwangoku anokuba luncedo kakhulu kwiinkampani. Kwaye kukuba, kwi-Instagram, awukwazi ukubeka amanqaku. Amakhonkco asebenza kuphela kwiprofayili kwaye ngokuqhubekayo ukutshintsha ikhonkco ayinakwenzeka.
Kufuneka wenze ntoni ke? Kulula, sebenzisa amabali. Iinkampani zinokulayisha imifanekiso elungisiweyo yamanqaku azo kwaye, ukongeza kwiprofayile, zinokulayisha amabali kunye nabo kwaye ngaloo ndlela banxibelelane ukuze kube lula kubasebenzisi ukufikelela kweli nqaku ngaphandle kokuya kulikhangela.
Ke, izicelo zomntu wesithathu azisetyenziswanga (leyo iMeta ingayithandi kakhulu) kwaye izibalo zinokunyuka ngokwemvelo.
itemplate yebali le-instagram
Uyakhumbula oku kungasentla? Ngabayili bamaphulo abo? Ewe, kulapho ungangena khona, kuba kunokuba nomdla ukubonisa izindululo zakho kubathengi, yenze ngethemplate yamabali e-Instagram. Luyilo olulinganisa inethiwekhi yoluntu kwaye iyenze ibe yinyani ngakumbi.
Ngoko ke, nantsi eminye imibono onokuyisebenzisa.
Siza kuqala ngetemplate ekunika iindlela ezininzi zokuyila uyilo lwakho. Lilonke kukho malunga neetemplates ze-20 ezingasetyenziselwa izitolo zempahla okanye iimveliso ngokubanzi.
Inzuzo abanayo kukuba bashiya indawo eninzi, kokubili kwimifanekiso kunye nesicatshulwa.
itemplate ye-cyber ngoMvulo
Njengoko usazi, iivenkile ezininzi ngoku zenza intengiso yeBlack Friday, Cyber ​​​​Monday... Ewe, eli tyala ligxile kulo mhla wokugqibela kunye necandelo lefashoni kunye nezixhobo.
Ngoku, ayiloncedo kuphela kulo mhla, kodwa kwabanye abaninzi, kufuneka uyihlele kwaye uyilungise ngendlela othanda ngayo. Uya kufumana itemplates ezili-10, zonke ziyi-PSD.
Ngokwenyani ayisiyiyo enye kodwa yipakethi enabaninzi babo. Uninzi olukhulu luya kuba mnyama namhlophe, okanye lumhlophe lumnyama kunye negolide. Ungabeka ifoto kunye nombhalo. Kwaye nangona zibhengezwa ngefashoni kuphela, inyani kukuba unokuzisebenzisa kwamanye amacandelo, ngumcimbi wokuhlela i-PSD kunye nokutshintsha into oyifunayo.
Kule meko siza kunyonyoba iphepha apho unokwenza khona iitemplates zasimahla zamabali e-Instagram. Inyaniso kukuba unabaninzi onokukhetha kubo, kwaye kumacandelo ahlukeneyo.
Kufuneka nje ujonge apha.
Izakhelo zebali le-Instagram
Ezi zijolise kumaphulo entengiso, kwaye inyaniso kukuba ayisiyombono imbi, kuba abaninzi banokukuqesha ngenxa yeso sizathu. Ke ngeenkcukacha ezimbalwa kunye notshintsho unokwenza uyilo oluhle kakhulu.
Baza kuza kuwe kuzo zombini i-PSD kunye ne-AI ukuze ukwazi ukusebenzisa inkqubo yokuhlela umfanekiso oyithanda kakhulu.
Kule meko, yipakethi enamabali angama-30 e-Instagram, kusetyenziso lwezorhwebo kunye nolomntu.
Banococeko olucocekileyo kodwa kwangaxeshanye uyilo oluhle kwaye basebenzisa izinto ezahlukeneyo ukubanika inkangeleko enomdla. Ukongeza, njengoko isitsho, zibandakanya i-5 ekhethekileyo kunye noyilo oluncinci.
Ibali elidibeneyo kunye neposi
Ngaba ufuna ukuba zombini upapasho kwiprofayile yakho kunye naleyo ikumabali ifane okanye inxulumane ubuncinane? Oku kunokuba ngumbono omhle wento ebesikuxelele yona ngaphambili kwiinkampani ezifuna ukuthengisa okanye ukukhuthaza amanqaku avela kwiblogi kwaye kufuneka ishiye ikhonkco kumabali ukuze ifikeleleke ngakumbi.
Kule meko uya kuba noyilo lwalo naliphi na icandelo, kunye ne-monochrome kunye nombala omnyama nomhlophe.
Zizonke uya kuba neefayile ezingama-40, ezili-10 zezithuba kunye ne-10 zamabali.
Le yenye yeepakethe ezinkulu oza kuzifumana kuba ineetemplates zebali le-135 le-Instagram. Nokuba ndingabeka iibhanile, ungakhathazeki kuba zibonakala zilingana namabali.
Apha uya kufumana iindidi ezininzi kangangokuba ziya kufezeka kulo naluphi na uhlobo lwenkampani kwaye ngaloo ndlela unokubonelela ngemibono eyahlukileyo yoyilo olufanayo ukuze ukwazi ukukhetha othanda kakhulu.
Ewe kunjalo, unokwenza olwakho uyilo kwaye ngaloo ndlela udale into eyintsusa. Kodwa ukuba ufuna ukonga ixesha kwaye wenze umsebenzi wenziwe ngokukhawuleza okukhulu, ungabonisa olu khetho kuye kwaye ubone ukuba uyazithanda na, okanye uzenze ngokwezifiso ngokuba nesiseko esele siyilwe.
Ngaba unobuganga bokwenza itemplate yamabali e-Instagram?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Itemplate yamabali e-Instagram
Ndingayenza njani i-GIF ye-Instagram